Dharka Xeebta, Dharka Isboortiga, Dharka Dharka Dibadda - Kuanyang
Dhaawaca meeraheena ku keenay isticmaalka balaastigga ah si dhib yar lama tirtiri karo
Caaggu waa wax soo saar ka mid ah waqtigeenna, gaar ahaan badaha. Bacaha balaastikada ah iyo dhalooyinka PET-ka ayaa ku soo duulay nidaamka deegaanka deegaanka waxayna ku fideen aduunka oo dhan. Sida laga soo xigtay tirakoobyada, qiyaastii 9 milyan tan oo jajab ah oo balaastig ah ayaa lagu daraa baddaha sannad kasta. Iyada oo laga jawaabayo dhibaatadan, dib-u-warshadaynta meeshii booliiste waddani ah (oo cunaysa saliid badan) ayaa ah xalka ugu wanaagsan deegaanka
Wuxi Kuanyang Dharka Teknolojiyada Teknolojiyada Co., Ltd. waxay ku takhasustay horumarinta iyo isticmaalka dharka isboortiga bannaanka iyo gudaha. Sanadihii la soo dhaafay, sababo la xiriira walaaca caalamiga ah ee wasakheynta caaga, shirkadeena waxay u guureysaa dhar waara oo dib loo warshadeeyay.Waxa naga go'an inaan dhisno silsilad sahay u ah bey'adeed oo deegaanka u fiican iyo alaabooyin waara. Waqtigan xaadirka ah, shirkadeena waxay heshay shahaadada GRS waxayna noqotay alaab-iibiyaha la cusboonaysiin karo.
Dharka ayaa muujinaya
SOO SAARKA SOO SAARKA SOO GALKA SAMAYSKA QALABKA MAYA KWB-2125 Nooca Bixinta Nooca Wax-Ka-Dalbashada 95% Po ...
KOOXDA SOO SAARKA Dharka Isboortiga FARSAMADDA SHAQADA MAYA KW6402 Nooca Bixinta ee Nooca Wax-Ka-Dalbashada 86% ...
NOOCA SOO SAARKA Dharka Isboortiga FARSAMADA DHAQANKA MAYA KW18-9040 Nooca Alaabada Bixinta ee Wax Ka Beddelidda ...
KOOXDA SOO SAARKA Yoga Xidho SABABTA SABABTA AH KW18-1077 Nooca Bixinta Waxyaabaha Sameeya-Si Loo Dalbo 8 ...
SOO-SAARKA SOO-SAARKA Dharka SABABKA SABABTA NO KW-2182 Nooca Bixinta Nooca Wax-Ka-Dalbashada 92% N ...
KOOXDA SOO SAARKA Dharka Isboortiga FARSAMADDA QALABKA MAYA KW-2182 Nooca Alaabada Bixinta ee Wax-ka-Dalbashada 88 ...
JAAMACADDA SOO SAARKA JAAMACADDA SHAQAALAHA SHAQADA MAYA KWS21-1021 Nooca Alaabada Bixinta ee Wax-ka-Dalbashada Qalabka 10 ...
KOOXDA SOO SAARKA Yoga Xidho SABABTA SABABTA AH MAYA KWC21-4081 Nooca Alaabada Bixinta ee Wax Ka Samaynta ...
Isboortiga jumlada Jacqua ...
KOOXDA SOO SAARKA Yoga Xidho SABABTA SABABTA AH KWC21-4079 Nooca Alaabada Bixinta ee Wax Ka Samaynta ...
Diyaar u ah inaad waxbadan barato
Ma jiraan wax ka fiican aragtida natiijada ugu dambeysa. Wax ka baro helitaanka sheekooyinka
buug yar oo ah shaybaarada xardhashada laser. Oo kaliya la weydiistay macluumaad dheeraad ah
Guji si aad wax u weydiiso
Akhriso wararka qaar
Ku noqo isbeddelka midabka-isboortiga runta ...
Fahamka gudaha-fahanka isboortiga indus ...
Suudhka isboortiga ragga iyo dumarka ...
Isbeddello casri ah - isbeddellada faahfaahinta ee yoga ...
Ilaalinta deegaanka iyo joogtaynta ...